विपद्ले अर्थतन्त्र नै थिलथिलो - Karobar National Economic Daily
विपद्ले अर्थतन्त्र नै थिलथिलो
query_builderAugust 16, 2017 2:07 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility433
गत सातादेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा परेर मंगलबार बेलुकासम्म १ सय ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३५ जना बेपत्ता छन् । दसौं हजार घर डुबानमा परेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
बाढीपहिरोले सप्तरी, सिरहा, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा, सुनसरी, मोरङ, झापा, बाँकेलगायतका जिल्लामा बढी क्षति पुगेको छ र अर्बौंको बालीनाली नष्ट भएको तथा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको छ । मानवीयसँगै भौतिक क्षति पनि धेरै भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै थिलथिलो पारेको छ ।
यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने ? मानवीय क्षति भैरहँदा धेरैको ध्यान नखिचे पनि यो विषय एकदमै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विपद्को अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
दातामा मात्र भर नपरौं
पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय
लगातारको वर्षाका कारण तराई बाढीको डुबानमा र पहाड पहिरोको चपेटामा परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सोचेजस्तो विपद् व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । यस्तो बेला मैले देखेको हामीहरू सरकार र दातामाथि निर्भर हुन्छौं ।
जनता जहिले पनि सरकारमा निर्भर रहने र सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समयमै विपद् व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस्तो बेला त्यस्ता ठाउँको मानवीय क्षति भयानक देखिन्छ भने अन्य क्षति गौण देखिन्छन्, यद्यपि पशु चौपायाहरूको यकिन विवरण हँुदैन । भौतिक सम्पत्ति कुहिएर नष्ट हुन्छ । चौपायाहरूको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले महामारी आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो बेला सरकार, गैरसरकारी संस्था, दाताहरू सबैले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, कोसी ब्यारेजका केही ढोका खोल्न सरकारले गरेको कूटनीतिक पहल सफल भएको भन्दै सबै ढोका खुल्दा भारतको बिहार डुबानमा पर्ने र त्यसो नगर्दा नेपाल डुबानमा पर्ने अवस्था रहेकाले विपद्का बेला सोचेर मात्र काम गर्नुपर्छ । विपद्ले अर्थतन्त्र निकै थिलथिलो भएको छ । महँगी सुरु भइसकेको छ ।
व्यापारीहरूले मोलमलाइजा सुरु गरिसकेका छन्, चाडबाड नजिकिँदै छ । यतिबेला सरकारमाथि विश्वासको संकट छ । दुई वर्षअघि भूकम्प गएका बेला स्थापना भएको पुनरुद्धार कोषले अहिलेसम्म पनि खासै काम गर्न सकेको छैन ।
प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ भने तेरो–मेरो भन्नुभन्दा सबै मिलेर मानवीय सहयोग गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि २ नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन । अन्य प्रदेशमा निर्वाचन भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आएका छन् ।
उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । खोलानालाहरू दोहन हुँदा, चुरे भत्किँदा यो समस्या आएको हो । यसबारे बेलैमा सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यहाँका जनतामा लागेको घाउमा मल्हम लगाउन सकियो भने मात्र पनि विपद्को अर्थतन्त्र उकास्न सघाउ पुग्नेछ ।
आपत्कालीन उद्धारको योजना बनाऔं
प्रा.डा. पूण्यप्रसाद रेग्मी
पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार,अर्थ मन्त्रालय
विपद् जुन बेला, जति बेला पनि पर्न सक्छ । दुई वर्षअघि गएको भूकम्प भनौं या नाकाबन्दी तथा हरेक वर्ष बर्सातको समयमा हुने बाढीपहिरोका घटना हुन्, सदियौंदेखि यी समस्या आउने गरे पनि हामीकहाँ तत्काल विपद् व्यवस्थापन गर्ने खालको कुनै मेकानिजम छैन । अप्ठ्यारोमा परेका जनतालाई कसरी छिटो उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने तत्कालीन योजना नै अहिलेसम्म छैन । यो विडम्बनाको कुरा हो ।
सयौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्् । हजारौं घर बाढीले बगाएको छ । पहाडमा पहिरोले पुरिएका अन्नबाली, पशु चौपायाको यकिन विवरण आउन सकेको छैन । मानवीय क्षतिअगाडि भौतिक सम्पत्ति भने गौण देखिएका छन् । यद्यपि ठूलो भूमिका अर्थतन्त्रमै रहन्छ । तराई क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड पनि हो, थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन, त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, अबका दिनमा उद्धारको तत्कालीन योजना ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति भन्ने कुरा जानकारी गराएर आउने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि विपद्को उद्धारका लागि सरकारले विशेष संयन्त्र खडा गरेको हुन्छ । हामीकहाँ कुनै योजना छैन । घटना घटिसकेपछि योजना बनाएर अघि बढ्नुभन्दा पहिले नै योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ, जसले गर्दा पीडितको छिटो उद्धार हुन्छ । यस्ता कार्यक्रम राज्यबाटै हुनुपर्छ ।
राज्य बलियो र सशक्त भएर लाग्नु जरुरी छ । बाढीपहिरोले मानवीय क्षतिसँगै त्यहाँको खेती बगाएको छ, उद्योग बगाएको छ, पशु–चौपाया बगाएको छ, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी सबै मरुभूमि भएका छन् । यसले समग्र मुलुकलाई चहयाएको छ ।
यस्तो विपद्को घडीमा अर्थतन्त्रलाई मात्र नहेरेर सबै एकजुट भएर मल्हम लगाउनु उपयुक्त हुनेछ । विपद्को मौका छोपेर कसैले अभाव, सिन्डिकेट, कालाबजारी गर्छ भने त्यस्तो व्यापारीलाई छोड्नु हँुदैन ।
बिमालाई प्राथमिकतामा राखाै‌
डा. विश्व पौडेल
दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्प र अहिले आएको प्राकृतिक प्रकोप विपत्तिका प्रतिनिधि घटना हुन् । यस्ता घटनाको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर विपत्तिबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरामा हामी सजग हुनु निकै जरुरी छ । मानवीय क्षतिसँग अन्य भौतिक क्षतिको अझै ठोस लेखांकन भएको छैन । तत्कालै राहत दिने विषयमा पनि हामीले कहिल्यै सोचेनांै ।
ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ६५ प्रतिशत योगदान रहेको पाइए पनि हाल आएर २९ प्रतिशतमा झरेको छ । खेतीयोग्य जमिन हाउजिङ र प्लटिङमा सीमित भए, जसले भूक्षय, बाढीपहिरोजस्ता घटना बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी हाँक्ने भन्ने एउटा चिन्ताको विषय हो, साथै नेपालमा विपद् व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । क्षति हुनुभन्दा हामीले खेतीयोग्य जमिन, बिमा, पशुपन्छीको पनि यकिन तथ्यांक राख्नुपर्छ ।
हामी त्यसमा चुकेका छांै । हरेक वर्ष आउने बाढीपहिरोका समस्याबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल हुँदैन । डुबानमा पर्ने ठाउँमा बाली लगाउने कि नलगाउने, कस्तो बाली लगाउने भन्नेसम्मका अध्ययन पनि भएको हुँदैन । क्षति भएपछि त्यसको लागत कसले दिने भन्ने पनि अन्योल छ ।
मेरो विचारमा विपद्पछिको अर्थतन्त्र हाँक्न निकै कठिन छ । यसमा राज्यले प्रभावकारी रूपमा नियम–कानुनहरूको तजुमा गर्नु जरुरी देखिएको छ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा विपद्पछि सहजै काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण होस् । यसका लागि बिमालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ, ताकि विवरण संकलन गरेलगत्तै तत्काल राहत दिन सहज हुनेछ ।
विपद् व्यवस्थापन कानुन आउदै
भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याउन सक्ने परिस्थितिसँग जुझ्न महŒवपूर्ण ठानिएको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनमा राज्यको तीनवटै तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइन लागेको बताएको छ । अन्तिम चरणमा रहेको भनिएको उक्त विधेयकमा उद्धार, राहतजस्ता काममा तीनवटै तहमा अधिकार बाँडफाँड हुने र केन्द्रमा विशिष्ट पदाधिकारीको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
झन्डै ८ वर्षदेखि मस्यौदाको रूपमा रहेको विपद् व्यवस्थापन विधेयक दुई पटक संसद्मा पुगेर पनि फिर्ता भएको थियो । राज्य पुनर्संरचना अनुकूल हुने गरी बनाइन लागेको भनिएको उक्त विधेयकमा राज्यको तीनवटै निकाय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनको अधिकार दिइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने योजनाअनुसार उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समितिलाई विधेयकमा परिषद् भनिएको छ ।
उक्त परिषद् प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने भनिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय तहमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका मेयरहरूको अध्यक्षतामा रहने गरी स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समिति राख्ने उल्लेख छ ।
विपद्बारे कसरी जानकारी लिने ?
केही दिनदेखिको अविरल बर्सातका कारण पूर्वी तथा तराईका जिल्लामा जनधनको क्षति भएसँगै सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । बाढीपहिरोका कारण हुन सक्ने मानवीय क्षतिबाट बच्न सरकारले विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । बाढीपहिरोका कारण हालसम्म तराई तथा पहाडी जिल्लामा सयांैले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अर्बौंको क्षति भएको छ । अबका दिनमा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले जनतामा विपद् व्यवस्थापनका सूचना प्रवाह तथा उद्धारलाई तीव्रता दिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन तथा बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा सूचना प्रवाह र जानकारी पु¥याउन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय तहको आपत्कालीन बैठक बसी सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जनतासमक्ष सूचना पु¥याउन सम्बन्धित जिल्लाबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा मोबाइलमा म्यासेज पठाएर अलर्ट गराउने काम भइरहेको छ । हामीले पहिलेदेखि नै म्यासेज पठाएर जतालाई अलर्ट गर्ने काम गर्दै आएका छौं । म्यासेज अलर्टमा केही समस्या आएकाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुखको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेर रेडियो तथा अन्य माध्यमबाट पनि सूचना प्रवाह गर्दै आएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले केन्द्रीय तहको आपत्कालीन बैंठकले सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरी सूचना प्रवाह तथा उद्धारकार्यमा खटाएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका सुरक्षा निकायबाट पनि बाढीपहिरोका बारेमा जानकारी लिन सकिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी बाढीपहिरोका बारेमा ट्विटरबाट पनि जानकारी लिन सकिनेछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि ट्विटरमार्फत सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । उसले आफ्नो अफिसियल ट्विटर, फेसबुकमार्फत पनि थाहा पाउन सक्ने संयन्त्र स्थापना गरेको छ ।
राहतकोषमा २० अर्ब
सरकारले बाढीप्रभावित २० जिल्लामा तत्काल राहत संकलन गरी वितरण गर्ने भएको छ । हालै आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएकाका लागि तत्काल राहत संकलन गरी वितरण गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न समूह र सर्वसाधारणले दिएको रकम जम्मा भएको हो । त्यसैगरी देशका ७५ जिल्लामा शाखा रहेको केन्द्रीय विपत् उद्धार तथा राहत समितिमा समेत करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस्ता कोषमा रकम अभाव नभए पनि सरकारको अकर्मण्यता, मनसुनी बाढी र पहिरोमा परेका परिवारलाई राहतको योजना नहुँदा सामग्री वितरण गर्न सकेको छैन, यद्यपि सरकारले वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माको संयोजकत्वमा सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उच्च पदाधिकारीबीच छलफल गरेर बाढीप्रभावित २० जिल्लामा तत्काल राहत संकलन गरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठन र अन्य निजी क्षेत्रका संगठित संघसंसथाबाट राहत सामग्री संकलन गरी केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सम्बन्धित संकलन केन्द्रसम्म पु¥याउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै लगातारको वर्षा र बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने पानी, तयारी खाना, औषधि, लत्ताकपडा, झुल, त्रिपाललगायतका अत्यावश्यक सामग्री संकलन गरी सम्बन्धित केन्द्रसम्म पु¥याउन निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले तत्काल पहल गर्ने भएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयले बाढीप्रभावित जिल्लामा तत्काल खाद्यान्न पठाउन नेपाल खाद्य संस्थान र साल्ट्र टे«डिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले बाढीप्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थालाई जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाउने भएको छ । केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उसले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने बताएको छ । गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।